(Deg Deg) RW Kheyre oo doonaayo in uu bixiyo amar lagu joojinayo diyaaradaha keena Qaadka si laab la kac ahMuqdisho Online - Caasimada Muqdisho. Somalia | Muqdisho Online - Caasimada Muqdisho. Somalia
Home Wararka (Deg Deg) RW Kheyre oo doonaayo in uu bixiyo amar lagu...
(Deg Deg) RW Kheyre oo doonaayo in uu bixiyo amar lagu joojinayo diyaaradaha keena Qaadka si laab la kac ah
RW Xasan Cali Kheyre oo ka jawaabaya falkii aay dowladda Kenya xiriirka ugu jartay dowladda Soomaaliya ayaa caawa ku wargaliyay MW farmaajo in uu doonaayo uu amar ku bixiyay in gebi ahaanba la joojiyo diyaaradaha Qaadka ka keena dalka Kenya laga bilaabo berri oo taariikda tahay Febraayo 17, 2019. Wali lama oga in Farmaajo ku raacay goaa’nkaas iyo in kale.
Arrintaan oo ah laablakaca iyo fudeydka aan siyaasad dugsaneyn, qaadka waan u baahannahay in la joojiyo laakiin fudeykan aan caqliga ku dhisneyn maaha mid aan guul ku gaareyno.
Dowladda Soomaaliya ayaa filan waa ku noqotay kaddib markii dowladda Kenya xiriirka dibloomisiyadda aay u jartay dowladda Soomaaliya iyadoo sabab ugu dhigtay in Dowladda Soomaaliya aay xaraashtay ceelasha shidaalka ee Soomaaliya iyo Kenya aay dacwada ugu socotay maxkamadda adduunka.
Waxaan ka shaki ku jirin in jawaab adag ay ka bixin doonto Dowladda Kena hadii dowlada Soomaaliya amarto joojinta qaadka, kaasoo dhaqaale badan ka soo gala ganacsatada qaadka ee Kenya iyo dowladda Kenya.
RW Kheyre ayaa tan iyo markii loo magacaabay Ra’isul Wasaaraha Soomaaliya waxa uu ku caan baxay in uu qaato go’aanno siyaasadeed oo aan laga fiirsan. Waa markii afaraad uu RW Kheyre dowladda Soomaaliya geliyo qalaanqal siyaasadeed aanay dowladda Soomaaliye maanta aanay awood u lahayn.
Previous articleWaa maxay sababta ay dowladda Kenya xiriirka ugu jartay Soomaaliya?
Next articleFadeexad ka soo Shaacbaxday Warsaxafadeedkii Kenya. Akhriso
Hirshabeelle oo war cad kasoo saartay hadal kasoo baxay Wsaaarada Arrimaha Gudaha DFS
Xildhibaanada Baarlabaanka oo ku dhawaaqay go’aan ka dhan ah Farmaajo
Somaliland oo ka hadashay booqashada Uhuru Kenyatta
Reporter - May 25, 2019
Councillor Rakhia Ismail has been chosen as Islington's Mayor for 2019 - 20 at Islington's Annual Council meeting (Thursday 16th May). COUNCILLOR RAKHIA ISMAIL HAS...
Masuuliyiintii loo diray Kaxandhaalle oo ku fashilmay xal ka gaarida dagaalkii halkaasi ka dhacay